Azo antoka ve ny mametraka bisikileta karbonina amin'ny mpampiofana? - Karbaona
Tena > Karbaona > Carbon bisikileta amin'ny mpampiofana - fanontaniana mahazatra
Carbon bisikileta amin'ny mpampiofana - fanontaniana mahazatra
Azo antoka ve ny mametraka bisikileta karbonina amin'ny mpampiofana?
Miankina amin'nympanazatrakarazana sy fampiasana, mety hampiasa hery tsy mahazatra ao aminao izy iobisikileta, manaova faritra sy / na malemy na manimba ny anaobisikileta, mamaky sombiny amin'ny boky torolàlana an'ny tompony manokanampanazatramampiasa. Marina indrindra izany ho an'ny fitambarana nakarbaonafibrebisikiletamiraikitra mafy amin'nympanazatra.
Tongasoa eto amin'ny iray hafa Mangataha GCN-eny.- Marina izany, manontany anay ianao na inona na inona ary hanao izay fara herinay izahay hamaliana izany. Voalohany, Tom, manana fanontaniana amin'ny sisintany isika.
maninona aho no mitombo lanja
Avy amin'i Jeremy Emilio izay nanontany ny fomba hitondrako ny rahavaviko, sakaizako handeha bisikileta. Ankehitriny dia hitan'ny rehetra ny tsy fahalavorariana. Smale Rider dia nanondro antsika hoe: 'Andraso, izy roa ve?' Hoy i Luciano Namo: 'Mila mamantatra zavatra vitsivitsy ianao aloha, Jeremy, maninona ianao no miaraka amin'ny rahavavinao?' Ary heveriko fa tsy mangataka an'io valiny io isika Tom.- Tsy maninona, tsy maninona.
Satria nanantona ireo mpitsikera rehetra i Jeremy ary nilaza hoe: 'Tsia, misaraka.' - Fanamaivanana izany. Eny ary, amin'ny bisikileta rahavavavinao, Tom, mety manana traikefa bebe kokoa ianao satria manana rahavavy ianao ary izaho tsy manana.
Ary ny anao dia bisikileta mahay sy mahay tokoa. Ary mbola tanora koa izy. Ka tsy maintsy nanao zavatra tsara ianao - tanora sy haingana noho izaho.
Ary izany Nandritra ny taona maro.- Tsy te hilaza izany aminao aho, saingy eny.- Zava-misy izany, sa tsy izany? -Eny.- Ahoana no nahatonga an'i Annie nandeha bisikileta? Heveriko fa niditra bisikileta i Annie satria mbola tanora izahay, folo na roa ambin'ny folo taona angamba.
Ary raharaham-pianakaviana fotsiny io. Ka raha mbola tanora ny rahavavinao ka mbola mandeha miaraka amin'ny ray aman-dreninao na zavatra hafa fotsiny ianao dia miala voly amin'ny bisikileta fotsiny dia toerana tsara hanombohana. Raha somary antitra izy ireo ary mieritreritra ianao fa mila manomboka bisikileta fotsiny dia tsy tena fantatro.
Mitaingina kafe? Ny mitaingina kafe dia fomba tsara hampahafantarana ny olona amin'ny bisikileta. - Ie, heveriko fa ny fahafinaretana fotsiny angamba, toa ny nolazainao, ary avy eo andramo ny tsy hanakorontana azy ireo, aza raisina an-tampon'ny havoana adaladala izy ireo ary avelao eo amoron-dàlana, lalana mangina, tena zava-dehibe izany. Tsy misy olona tia fifamoivoizana rehefa manomboka bisikileta ry zareo.
Tsy dia tiako loatra izao ny fifamoivoizana. Fa eny, andao handeha. Manantena aho fa hanampy anao ry Jeremy.
Tsara izany, manaraka dia manana an'io fanontaniana io isika. Oh, tiako t. Nosoratan'i Jukka Pakkanen.
Mihazona ny bisikiletanao taloha ve ianao? Inona no ataonao amin'ireo taloha raha manapa-kevitra vaovao ianao? Inona no ataonao? - Raha manana ilay taloha aho dia mety hivarotra azy - Eny, tianao tsy hitahiry entana izany, sa tsy izany? - Tsia, manana bisikileta notehiriziko aho. Manana bisikileta roa notehiriziko nandritra ny taona maro izay tiako ny nitaingina azy indraindray. Miaraka amin'ny GCN sy ireo mpiara-miasa amin'ny bisikileta izahay amin'ny toerana tsara vintana izay tsy nahatsapako ny ilana hitrandrahana ny bisikiletanao manokana - eny.
Eny, nitazona bara tamin'ny andro bisikiletako aho satria ny habakabaka feno dia naka toerana be loatra. Ary ara-teknika dia lany andro ihany na izany aza. Fa ny frame dia zavatra miavaka.
Ary avy eo dia nitazona bisikileta roa aho nandritra ny andron'ny hazakazaka, indrindra raha tsy nahazo bisikileta tsara avy amin'ny GCN aho dia mbola manana roa an'ny ahy manokana. Araka izany dia tsy malaza izy ireo. Tena tiako izy. - Manontany tena aho hoe manao ahoana i Matt? Satria nahita ny bisikiletany Giro D'Italia 2000 izy.
Na ny bisikiletany Giro D'Italia 2000 dia hita tao amin'ny fivarotana bisikileta tany Italia, ka manenjika azy izy. Ity dia bisikileta ankamamiana tokoa satria misy fahatsiarovana mahafinaritra be dia be mifandraika amin'izany - Angamba tsy dia fahatsiarovana lehibe avy amin'izany hazakazaka izany. Sahirana be izy tamin'io - Marina - Eny, tamin'ny fianjerany sy ny ratra nahazo azy.
Tsara izany, manaraka. Tokony hiahiahy momba ny fampiasana ny bisikiletan'ny karbônako amin'ny mpanazatra turbo ve aho? ? Ho tapaka ve ny fefy noho ny enta-mavesatra? Amin'ny ankapobeny, angano mahazatra momba ny frame fibre carbon. Izay tsy tokony hampiasanao azy ireo amin'ireo mpanazatra Turbo iray naoty iray izay niresahanay tamin'ny mpanamboatra dia toa tsy misy amin'izy ireo milaza fa ny fampiasana azy ireo amin'ny mpanazatra Turbo dia hanafoana ny fiantohana anao.
Izany dia milaza amiko, raha ny hevitro, fa azo antoka. Ahoana raha manandrana ianao? Izaho dia tena mitady olona efa za-draharaha miaraka amin'ny baoritra karbonika voahitsaky ny mpanazatra turbo, tsy tena hitanao izy, sa tsy izany? - Tsia, tsy azonao atao. Miahiahy aho fa ny fiahiahiana dia angamba avy amin'ny bisikileta namboarina ary avy eo ny fiolahana.
Saingy mbola tsy naheno an'izany aho. - Betsaka ny bisikileta efa antitra izay efa teo amin'ny mpampiofana mpizara efa ela ary tsy mampiseho sorisory amin'ny fihenjanana. Miverina amin'ireo angano momba ny fibre karbonika, saingy manana lahatsoratra momba izany izahay, sa tsy izany? - Manana izahay - Eo izy io.
Ireo zavatra fito tsy fantatrao momba ny fibre carbon. Ny tsy fifankahazoan-kevitra maro no rava amin'ity lahatsoratra ity. Jereo izany. (Mozika rock) (Fahavaratra) - Ny fahafahan'ny singa iray amin'ny ankapobeny dia tsy miankina amin'ny fitaovana.
Ny ampahany tsirairay dia tokony hovolavolaina miaraka amina tranga enta-mavesatra manokana. Admi Mazava ho azy, amin'ny karbaona, toy ny fitaovana rehetra, misy ny loza mety hitranga raha afaka mametra ny fetranao ianao, ohatra, hahatratrarana tanjona mora be. Fa ny olana dia mipoitra fotsiny rehefa tsy namboarina tamina horonantsary absolue cracking.
sarin'ny crameleon santa cruz
Ny fanontaniana manaraka dia avy amin'i Sam Running, izay milaza hoe: Misy fiantraikany amin'ny hafainganan'ny bisikiletanao ve ny halavan'ny rojo? Inona no tianao holazaina si? - Eny, miresaka fanitsiana hafainganam-pandeha bitika kely isika, sa tsy izany. Toy ny hoe watt roa na roa. Fa raha diso be ianao, dia azo atao tokoa.
Raha tery loatra izy io, dia mety hametahana kokoa ilay rojo. Ary avy eo raha lava loatra dia misy rojo kokoa hanangona. Miresaka bitika sy bitika isika.
Fa amin'ny ankapobeny dia mila mahitsy tsara ianao amin'ny fiovanao. Ary avy eo koa hitazomana ny rojo vy tsy hitebiteby sy hihena. Ka eny, avereno tsara ireo antony ireo fa tsy ataovy haingana ny bisikiletanao.
Tsara, Tom. Azonao valiana ve izany? Rehefa mankany andafy daholo ianareo maka sary, dia avy amin'i Ryan Donnelly io, mitondra mpandika teny ve sa miova sy manantena ny tsara indrindra fotsiny? Inona no mety hahatonga anao? Fiheverana? - Eny, Ryan, tsy miara-dia amin'ny mpandika teny izahay, ankoatry ny anglisy dia tsy mahay miteny vahiny amin'ny fiteny hafa izahay. Ny sasany aminareo dia mety hiady hevitra raha mahay teny anglisy ve isika na tsia.
Mahafantatra teny fanalahidy vitsivitsy izahay, fa ny ankamaroan'ny toerana itifihinay dia mandray bisikileta anglisy na vahiny betsaka. Noho izany dia matetika miteny anglisy ihany koa ny eo an-toerana. Fa tena ilaina tokoa ny mianatra teny lakile vitsivitsy raha any ivelany ianao na aiza na aiza.
Ary heveriko fa izany no hianarantsika ato amin'ity lahatsoratra manaraka ity, dia ny: 'fahadisoana dimy tsy tokony hataonao rehefa mandeha bisikileta any ivelany.' (mozika funky) - Raha somary hafahafa ny mitondra fiara ianao, somary miala amin'ny lalana voakapoka, dia mendrika tokoa ny hanaovana ny fikarohana. Jereo ny sakafo eo an-toerana, manao ahoana ny arabe, misy hopitaly ve eo akaiky eo, misy bi? fivarotana ke eo akaiky eo? - Ie.
Amin'izay ianao dia afaka milamin-tsaina. Izy io koa dia afaka manamaivana ny adin-tsaina kely ary azo antoka fa hiala amin'ny toe-javatra sarotra ianao. Raha ny marina dia tsy fitsipika ratsy harahina io na dia eo akaikin'ny tranonao aza ianao - dia toy izany hatrany amin'ny fanontaniana hafa.
Avy amin'i Tommy L3 ity. 'Eh, somary mankaleo aho izao mitaingina moto izao, ahoana no fomba hiverenako ilay antony manosika sy filan-tsain'ilay nitaingina ahy rehefa nanomboka? Tom, ahoana ny hevitrao momba an'ity sakaiza ity? - Fanontaniana henjana izany, sa tsy izany? Satria tsy fantatray raha toa ianao ka mankaleo sy tsy afaka mandeha amin'ny fitsangatsanganana, Tommy, eny amin'ny arabe mitovy, na zavatra toa izany isan'andro. Manolotra sosokevitra ianao raha mahita zavatra mankaleo na mampihetsi-po, maka fotoana fohy raha afaka.
Raha manana fomba fitaterana hafa ianao handehananao miasa na zavatra hafa. Makà fialan-tsasatra andro vitsivitsy, mamelombelona, ​​ary avy eo jereo raha mahita lalana hafa hitondranao fiara ianao. Hitako foana rehefa somary nototom-poko aho fa ny zavatra tiako indrindra dia ny manipy any amin'ny faritra misy vatokely na ny faritra tsy eny an-dalana mba hitazomana ny zava-baovao sy hanaovana zavatra hafa kely fotsiny.
Ahoana ny momba anao? - Eny hitako fa indraindray rehefa tsy tena te-hitondra, na inona na inona antony, rehefa manery ny tenako handeha aho dia mirona mankafy ny any ivelany. Ka raha ny marina, toy ny zavatra rehetra dia henoy ny vatanao sy ny lohanao ary ataovy izay tianao. Ny faharisihan-tena koa dia mety hahagaga.
Saingy tsy amin'ny fotoana maharitra, hanana andro fialantsasatra amin'ny taona 30. Izay eritreretiko, tsara, tsy te hivoaka aho ary avy eo dia hataoko ary miala voly. Mety handeha izany! Gaga ihany koa izahay, lahatsoratra iray manontolo momba io lohahevitra io.
Toy ny hoe torohevitra momba ny fifandraisana izany amin'ny ankapobeny. Manazava izahay sy Dan ny fomba hanatsarana ny fifandraisanao amin'ny bisikiletanao. Ary eny, ao anatin'izany ny faran'ny herinandro maloto. (mozika funky) - Mety ho tsara ny mandeha irery.
Fa mety hankaleo koa. Rehefa dinihina tokoa, dia tsy manana afa-tsy ny eritreritrao mandritra ny ora maro amin'ny orinasa ianao. Ka maninona raha mandeha mitaingina fiara miaraka amin'ny hafa? Ankehitriny, be dia be ny olona misafidy ny mitaingina mpiara-miasa hafa fotsiny, indraindray ianao dia afaka mivoaka miaraka amin'ny telo izay mety hitarika olona iray ho sadaikatra, na afaka misafidy mitaingina vondrona lehibe ianao.
Tendrony mazava ho azy fa tena mandeha. Handeha haingana be kokoa ny fotoana. Ary ankoatr'izay, tsy ny hahatongavanao any amin'ny toerana alehanao haingana ihany, fa ny mankafy ny fizotran'ny fahatongavanao ihany koa.
Ity no fomba ahafahanao mizara tarika ambony ary miala voly amin'ny ankapobeny .- Tarika ambony? - Eny, io fanontaniana io dia nisy ankihiben-tanana maro. Ka heveriko fa tokony hanome valiny isika.
Ary avy amin'ny Free Wheeler. Iza no manana ankihibe 182. 'Heveriko fa tokony hanao fanamby fanomezana GCN kely kokoa isam-bolana ianao amin'izay ny resy dia mila mampiasa bisikileta latsaky ny £ 150 ho an'ny diany rehetra, lahatsoratra GCN, ary fotoana fialan-tsasatra mandra-pahatongany amin'ny volana manaraka dia afaka manantena ny avoty ny tenanao.
Thumbs up raha te hahita an'io ianao na zavatra toa izany. Olona 182 no nahazo ankihibe. Ary avy eo ny Free Wheeler dia nanolotra safidy kely kely kokoa ho an'ny sazy izay hoe, 'Afaka manana akanjo na t-shirt loser ianao. 'Izay mbola toa tsy dia tsara loatra amin'ny bisikileta, na mitafy t-shirt ho an'ny iray volana. - Eny, amin'ny ankapobeny, ny fahaverezan'ny fanamby iray amin'ny GCN dia tsy dia tsara loatra, mainka fa ny fanasaziana antsika mandritra ny iray volana aorian'izay, dia toy ny hoe satroka adala no vonona ho amin'izany.
Ary koa, Tom, ny fomba nahitanay tao amin'ny lahatsoratray fa haingana be no azonao atao amin'ny bisikileta lafo vidy. Tsy maintsy nifoha dimy minitra mialoha isa-maraina aho raha tsy ahy izany. Azoko atao ny mampiasa ny Canyon Aeroad handehanako miasa. - Marina. - Ie.
Tsy maninona. Fanontaniana farany. Ity dia avy amin'ny Big Dog.
Hey alika be. 'Hey GCN, nilaza ny ray aman-dreniko fa tsy tokony hatao izany, fa raha tokony hividy takelaka electrolyte sy vovoka fanarenana aho ary ilaiko izany dia 16 taona fotsiny aho.' , fanontaniana tena mahazatra.
Hizara roa aho raha mety, Tom. Voalohany, heveriko fa mila manazava amin'ny ray aman-dreninao ianao na manasa azy ireo hijery ity lahatsoratra ity fa, raha ny tena izy, ny vokatra ara-tsakafo maro ho an'ny fanatanjahan-tena faharetana dia otrikaina ara-dalàna fotsiny izay nohanintsika, izany hoe gliosida, na amin'ny endrika masira na siramamy, Electrolytes , izay sira fotsiny izay ampidirinay amin'ny sakafontsika.
Ny antony mametraka azy ireo ao anaty tavoahangin-tsika, any am-paosintsika, any amin'ny bisikiletintsika dia satria ny fangatahana ataontsika amin'ny tenantsika dia mila manolo azy ireo bebe kokoa. Fony mbola kely aho dia narary an-doha tamin'ny alàlan'ny bisikileta rehefa reraka ary tsy fantatro hoe inona ny tsy fahampian-drano. Raha ny tena izy, dia tena nahazo tombony lehibe tamin'ny valan'aratra electrolyte aho tamin'izany.
Ny hany sisa dia sira kely tsy misy tavoahangy, fa mety hanakana ahy tsy hahazo hangover amin'ny bisikileta bisikileta izany. Ny hany zavatra mety mila fitandremana kely dia ny vokatra fanarenana. Sakafo ara-dalàna fotsiny izao, proteinina fotsiny, tsy ilainao fotsiny.
Ka aza manimba anao fa esory fotsiny. Ary mandany vola amin'izany ianao. Noho izany, manana lahatsoratra fanarenana izahay, ary misy torohevitra tena tsotra sy azo ampiharina be dia be any.
Manantena aho fa hanampy anao amin'izany fanontaniana manokana izany. Andriamanitro ô! Tsy azo antoka i Barry ho an'ny zaza 16 taona. Tsy nila nahita an'io aho. - Andriamanitra o. (mozika funky) - Mila solika hitaingenana ny vatanao.
Ary voalohany indrindra amin'ny endrika gliosida rehefa mihoatra ny 65% ​​amin'ny tahan'ny fonao farany ambony indrindra ianao, ary mazava ho azy fa matavy koa. Fitsangatsanganana kely dia lavitra, izao dia hampiasanao be dia be ny dia fanazaran-tena rehetra, ny tahiry angovo azonao rehefa mivoaka ianao ary momba ny Manontany GC Na inona na inona. Raha manana fanontaniana mirehitra momba ny bisikileta ianao, andao isika hiala amin'ilay fanontaniana sarotra apetraka eo am-piandohana dia zarao Na alefaso aminay fotsiny izany ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany na ampiasao ny tenifototra #TorqueBack, Jereo izay nataonay tao? ao amin'ny Twitter sy endrika media sosialy isan-karazany - ary raha te-hahita afa-po misimisy kokoa ianao raha mifikitra amin'ity faran'ny herinandro ity ary mbola te-hampiofana dia maninona raha miofana miaraka amin'i Sion? ny lalana mampatahotra ao amin'ireo teboka? Eo ihany ilay lahatsoratra.
Fotoana tena henjana ity. - Habibiana izany. Ary io dia olana ara-mekanika miha mahazo vahana matetika ho an'ny olombelona.
Raha te hahafantatra ny fomba fanesorana sy fanoloana bracket ambany pressfit ianao, tsy ity no asa mora indrindra, manana lahatsoratra momba izany koa izahay, eo io - ary koa misoratra anarana amin'ny GCN alohan'ny handehananao raha mbola tsy efa Tsindrio fotsiny izao tontolo izao, maimaim-poana izany.
Azonao atao ve ny mampiasa bisikileta arofanina amin'ny mpanazatra turbo?
Mitaingina abisikiletaraikitra ao ampanazatramanome enta-mavesatra samy hafa be aminy raha oharina amin'ny mitaingina nylalana. Noho io antony io, marobisikiletatsy navelan'ny mpanamboatra manokana nyAmpiasaoan'nykarbaonafefy fibre aompampiofana.
Ratsy ho an'ny bisikiletanao ve ny mpampiofana?
Mandritra ny mitaingina ampanazatrahanimbanyNofongorana tamin'ny fomba ofisialy ny angano momba ny karbaona, mbola mety hampidi-doza anao ny mitaingina anaty tranony bisikiletanaoamin'ny fomba roa: ny tadin'ny kodiarana sy ny harafesin'ny hatsembohana.
Azonao atao ve ny mametraka bisikileta amin'ny mpampiofana turbo?
Raha fintinina, eny. Saika ny lalana rehetrabisikiletahifanaraka amin'ny ampanazatra turboraha toa ka mbolaampiasainaony sotera omena amin'ny kodiarana any aoriana sy ny ankamaroan'ny tendrombohitrabisikileta afakaampiasaina koa, manomeianareoampidiro kodiarana malama amin'ny kodiarana aoriana. Ny Tokanabisikileta anaomety hiady amin'ny BMXs.
Azoko atao ve ny manantona bisikileta fibre karbonika?
Mety ve izanymanantona bisikileta karbonika? Raha matetika ianao no mitahiry ny bisikiletanao amin'ny rindrina, ny vaovaofibre karbaonaNy frame dia tokony tsy hanana olana eo amin'ilay havoana iray ihany raha mbola karakarainy am-pitandremana rehefa apetraka / esorina. Ny fandinihina ihany no mety ho fikororohana ny loko vita amin'ny hazo raha vita amin'ny vy ny tendrombohitra.
Manimba kodiarana ve ireo mpanazatra turbo?
Fehiny momba ny sitrapo afahasimban'ny mpampiofana turbonyny
Mpanazatra Turbohitafy ny kodiaranao haingana kokoa noho ny mitaingina ny arabe. Na izany aza ho an'ny ankamaroan'ny olona mampiasa ampanazatra turboIty dia tsy ho olana Toa ny ankamaroan'ireo mpitaingina haingana indrindra izay manana olana lehibe amin'ny fitafiana.08.03.2018
ahoana no mitaingina bisikileta
Sarotra noho ny lalana ve ny bisikileta amin'ny mpampiofana turbo?
mitainginaamin'ny Zwift dia mety hahatsapa ho sarotra kokoa noho ny antony 3 indrindra: ny vatan'olombelona lasa tsy mahomby amin'ny fampangatsiahana azy, mihena ny antony manosika anao noho ny tsy fananan'ny rivotra ny volonao sy nylalanamihetsika eo ambaninao, ary mandresy ny fanoherana ampanazatradia samy hafa be raha oharina amin'ny fandresena ny fanoherana
Azonao atao ve ny manova fitaovana amin'ny mpampiofana bisikileta?
Na dia fototra iray azampanazatra bisikileta afakaahitsy amin'nyfiovanany fanoherana amin'ny rarinyfitaovana miovaovaizay mety ho ny rehetrafiovanafaianareomila. Ny mpampiofana sasany dia manao informatika mihitsyianao dia afakamaka tahaka ny hazakazaka sy ny hazakazaka tena izy.
Azonao atao ve ny mampihena ny lanja amin'ny fampiasana mpampiofana bisikileta?
Ny siansa fanaovana fanatanjahan-tena dia mampiseho fa ny fiofanana anelanelam-potoana avo lenta (HIIT) dia fomba haingana hanatsarana ny fitaizanao, hampihenana ny metabolismao ary hamporisihana ny hormonina hitomboan'ny olombelona, ​​izay manampy daholoianareomandoro ihany nony faranymatavy. Tsy misy toerana tsara kokoa hanosehana ireo elanelam-potoana avo lenta ireo mihoatra ny amin'ny abisikiletasatria tsy misy fiantraikany aotra, ezaka fotsiny.01.03.2019
Tsara ve ireo mpanazatra turbo bisikileta?
Moampanazatra turbo tsara?Mpanazatra Turbodia kely kokoa noho ny mihodinabisikileta, ary noho izany dia mora kokoa ny mihetsika sy mitahiry rehefa tsy ampiasaina. Raha tianao ny fanazaran-tena voajanahary indrindra izay mamerina ny fahatsapanabisikiletaamin'ny làlana malalaka amin'izaympampiofana turbofanatanjahan-tena anaty trompetrabisikileta.
Afaka manimba bisikileta fibre karbonika ve ny mpampiofana?
(Amin'ny mpampiofana dia mihetsika miakatra izy, raha ny any ivelany kosa dia maro ny fivezivezin'ny sisiny). Shane koa dia ampahany tamin'ny horonantsary etsy ambany avy amin'ny Cycling Maven izay misy fampahalalana mahavariana taonina momba ny bisikileta fibre karbonika, ao anatin'izany ny manam-pahaizana momba ny fanamboarana karbaona milaza fa tsy mahazo bisikileta velively izy mba hamboarina noho ny fahasimban'ny mpanazatra.
Azo ampiasaina ho mpampiofana tsy mihetsika ve ny frame bisikileta karbonika?
Ny ankamaroan'ny mpitaingina bisikileta matotra ankehitriny dia mitaingina karbaona karbonika. Ary rehefa tonga ny fametahana an'io rafitra io amin'ny mpampiofana tsy mihetsika, mino ny mpitaingina sasany fa mametraka fihenjanana manimba eo amin'ilay frame ianao. Tahotra mety ve izany?
Iza no bisikileta karbonika tsara indrindra vidina?
“Tsy maninona ny ankabeazan'ny frame raha mihodinkodina fotsiny ianao, ao anaty lasely” hoy i Lee Prescott, izay manamboatra rafi-by vita amin'ny vy ao amin'ny Meteor Works ary mifanentana amin'ireo mpitaingina mividy bisikileta vita amin'ny karbaona vita amin'ny marika italiana Werking ao amin'ny studio Warwickshire, Velo Atelier. Heveriny fa miova ny zavatra rehefa ampianao izany.